HAQA DARARAMEE });
Biyya Gototaa birmadumaa isheef falmaan horratee ,gotonii ishees bilisumaa ishe akka hin sarbamnee,qabenyii ishee akka hin samamnee,aadaan ormaa akka irratii hin fe`aamneef rasasaan durra dhabachuun warra seenaa hojetanii dha.Diigamuu ishee hambisuuf gotoota falasamaa Ida`amuun biyya horratedha.
Hata`uu malee garraan hadhaa buburredha jedhamee akuma mamakamuu falla gotooni ishee garii hojetaan gochaa isaanin ittiyophiya kaan gannaniis hin dhabamanii.Olaantuma angoo fi fedhii angoo tikfachuuf jecha gochaa garra jabinaa fi sukkanesa lamilee ittiyophiya irrati rawwatamee jirra.Garre gantoota biyyaa ta`aniin,kuniis lamilee mirgaa ummataa fi haqaa ummataaf falmanirrati rawatamee basastoota irraan kaan ka`ee hangaa gadii bahuu fi ol lixuun namatii ulfatutii mirgaa namuuma fi demokrasii sarbuun hidhaa fi dararaa ijaan arguu fi gurraan dhagahuun namaaf ulfatu lamilerra gahaa turre.
Herra sabooni fi sabolamooni umatooni waliin tummataan cabsuun serri herri biyyatiin hin beknee fi hin deggarre bahuun darararaan qor-qalbii qamaa rawwatamee jirra.Ummaniis serra motummarati hunda`uun gafii mirgaa garra sera qabuun gaffacha turre jirra.Hangaa ammatii debii sirrii argachuuf dubiin garru faalla tatee.Shiftaa fi shororkessa jechuun umata gafii kaseef maqaa kenuun adababay irratii ajeesu, fanisuu fi ukamsuun hidhuun itti fuffee.Tarsiimo dararaa fi ajechaa hoggantotaa tajajilaa odeffanoo fi nageenya biyolessa fi INSA durranii giddu-galleessa godhate kuun gochaa garra-jabeenya lamiwaan irratti rawwatedha.Kun yadanoo yeroo dhihotiis.
Godanisaa senaa heerra fi serra biyyati cabsee maqaa biyya gurrachesse gochi sukkannesan dadara hanna fi malamaltumma gidduu-galeessa godhachuun biyyatii kessati rawwatamee kuniis ba`aa umanii batee demuu dadhabee waan ta`eef warraqsa qabsoo finninse motumaanis gaafi qabsoo umataa dhiibee dhuffe kana durra dhabachuu waan dadhabeef off haromsuun gaafi umataa debisuuf murteffate.Ministerii haraan akka filamaan ta`ee.Hogantooni haraa filamanis akumaa wadaa galaniin mirgaa namomaa,mirgaa dimokurasi fi olantuma serra kabachisuuf karoora baffachuun hojitii senaan.Akkatuma karoorfameniis dhitamuun mirgaa namooma hanna malamaltumaa waliin walqabatee yakoota rawwatama turre adda baasuuf Abban alaangaa Federala Walii galaa Korre kana hordofuu hundessun hoojii qorrano ragalee funaanu egalee.Abban alangaa federalaa walii galaas dhiitaa mirgaa namooma waliin wal qabatee sakata`insa gaggeseen angoo dahoo godhachudhaan hogantooni fi Miseensoni tajajilaa odeffanoo fi nageenya biyolessa INSA yakka rawwachu isaani ragalee qorranoo argaateen mirkanesee.
DHABAA GARRE:-Barra 1991 kessa univeristii awasaa galuun barrumsa eggalee,booda prezidantii barratoota Hawasaa ta`uun filatamee.yeroo sanatii Kemiikala warqee lagaa danbii kessa bahuu ilalchisee barratooni gafii kaasa turranii .Motumaan
dhemicharatii debii akka kenuu Dhabaniis adda durrumaan gafii dhihessa turre.Kanaa kessati osoo jirru humnota tikaa motumatiin mudee 16,1999 butamee.Dararaa Wagoota 10 boode batii darbee mana hidhati qamaa qalbiin cabee gadhiffame.
ANDWALEM AYALEW -Barra 1997 magala Finoota-salamiti Jarmayaa siyasa Qinijit bakka bu`uun dorgomee.yeroo durra Parlamaa senuu didee jedhameet batii lama hidhamee.
Bodaa Garra Artiraa imaluun G-7 makamee,barra 2003 kessa dirqamaa dhaba isaa irraa osoo jirru SudaanKhartum irratii humnuta tikaa motumatiin qabamee garraa biyyati fudhatame.Biyyaa kessatti dararaan yeroo dherraaf mana hidhaa dukana kessati ergaa irrati rawwatame boode TPLS hidhaa wagaa 55 itti mutesse turte.
KEFYALEW TAFARA Barra 1999 Unveristi Hawasati barataa wagaa 3ffaa turre.Boqonadhaaf hiriyotaa isaa waliin garra matii osoo demaa jirru humnutoa tikaa motumatiin dhukasnii itti banamee lukaa issa irraa rasaasan rukutamee.
Hiriyooni isaa lama batalumatii yoo du`aan inii lubuun hafee.Humnotinii tikaa Kefayalew qabaan osuma dhiguu manaa hidhaa galchanii,pinsaadhaan madaa isaa harkisanii gaffii gaffacha turran.Ademsuma dararaa akka kanaa kessatti Luktii isaa Lammaanu irraa murrame.Dararaa wagaa kudhanitiin boode qamaa hir`uun manaa hidhati lubuun bahu danda`ee jirra.
YONAAS GASHAAW. Qamaa motumaatiin obolessaa fi hadhaa isaa dhabee jirra.Yonaas magaala bahardar irratii hordoffiin itti bay`anaan garraa finfine demee.Finfinee osoo jirru humnota tikaa motumatiin ukamfamee fudhatame.Batii torbaa fi walakaa fannifameen dararamaa turre jedha.
Yoonaas Gaashaw fayyaasaa hidhamee qaama hir'uu ta'ee ba'e, wayita dhimmi isaa mana murtiitti ilaalamaa turetti uffata ofirraa baasuun madoosaa wayita agarsiisu xiyyeeffannaa miidiyaa hedduu ta'ee ture. Miidhaan irra ga'e akkanni of danda'ee hin deemne taasieera, kanaaf amma kiraanchiidhaan deema, doktarri isa yaalaa ture namni kun gara alaa deemee tajaajila wal'aansa fayyaa fooyya'aa argatu malee dhibeen narvii inni ittiin qabamee jiru fayyummaasaaf sodaachisaadha jedha.Yoonaas haala keessa jiru akkanaan dubbata.
"Qaamallee of danda'ee hin dhiqadhu. Dudda kiyyaan ciisuu hin danda'u, kiraanchii malee hin deemu``jedha
Waggaa sadi mana hidhaa maa'ikalaawiitti guyyaa guyyaan utuu dararamuu kan ture namni umurii waggaa 32 Seife Girma waan irra ga'e akkanaan dubbata. "Yeroo turtii koo mana hidhaa dukkana keessattin dabarse. Qorannoon halkan geggeeffama. Hundayyuu dirqamaan amani jedhu. Qofaatti natti cufanii na reebu, arrabsoodhaan hamilee koo cabsu. Eelaan maa'ikalaawwii baayyee jabaadha. Bakka dargaggoonni hedduun itti dararamaniidha. yeroo hedduu qorannoon sa'atii sadirraa eegalee hanga halkan walakkaatti ta'a, warri qorannoo geggeessan yeroo baayyee machaa'anii dhufu, kanaafuu si reebuu malee waan biraa hin beekan.''
Waxabajjii darbe Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad paarlaamaarratti namoonni waggoota darban keessa hidhamana harka qaamolee tikaatti mirgisaanii sarbamaa ture jechuun dhugaa bahanii turan. Namoota dhiittaa mirga namaa fi malaammaltummaa keessatti adda durummaan hirmaataniiru jedhaman keessaa qondaaltonni mootummaa torbaatamaa ol hanga yoonaatti hidhamaniiru.
Itoophiyaa keessatti Manneen hidhaa uummanni beekuun alattillee manneen hidhaa dhoksaa heddutu jirra.Kaneen kessa Magalaa Finfine Kessa qoffa maneen hidhaa dhoksaa torbatu jirra.Kana kessati namoonotarrati dararaan garra garra gageffama ,, hundi isaanii qondaaltota damee tikaatiin akka hoogganamaa ture mootummaan beeksiseera. Miidhamtoonni waggootaaf ukkaamamanii turanis amma dubbachuu eegalan.
Waggoota dabran keessa dargaggoonni kumaan lakkaawaman akkasuma mana hidhaatti dararamaa turan, gareen mirga dhala namaaf falmu namoonni kunneen haala lubbuun jiraachuun keessatti hin yaadamne keessa turan ittiin jedha. Hedduun isaanii kanneen bara 2015 irraa eegalanii hiriira nagaa bahuun haalli siyaas-diinagdee biyyattii akka fooyya'u gaafachaa turaniidha. Hedduun seera farra shororkeessummaatiin kan miidhamaniidha, seerri kun ta'e jedhamee morkattoota ukkaamsuuf kan bocameedha jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu qeeqaa ture.